Epididymitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Epididymitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း)
Epididymitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း) ကဘာလဲ။
သုက်ပို့ပြွန်ဆိုသည်မှာ သင့်ရဲ့ ဝှေးစေ့ကနေ ဆီးစွန့်ပြွန်ဆီကို သုက်ကောင်တွေကို ပို့ပေးတဲ့ဝှေးစေ့ရဲ့ အနောက်မှာရှိတဲ့ပြွန် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း ဆိုသည်မှာ ပိုးဝင်၍ဖြစ်စေ အခြားအခြေအနေ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်း ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံးဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်း အရာကတော့ ဘက်တီးရီးပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း မှတစ်ဆင့် ရောဂါ ကူးစက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝှေးစေ့ ဟာလည်းကူးစက်ခံရပြီးရောင်ရမ်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ သုက်ပို့ပြွန်နှင့်ဝှေးစေ့ရောင်ရမ်းခြင်း (epididymo-orchitis) လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
Epididymitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာယောက်ျားလေးတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။ အသက်၁၉ နှစ်ကနေ ၂၅နှစ်နဲ့ ၃၅နှစ်အထိမှာ အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်မားစေတဲ့ အရာတွေကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့် ဒီလို ရောင်ရမ်းတာကနေ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်အသေးစိတ် သိလိုလျှင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Epididymitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
• ဝှေးစေ့နာကျင်၍ အထိမခံနိုင်ခြင်း
သင့်ရဲ့ကပ်ပယ်အိပ် နာကျင်တာ၊ရောင်ရမ်းတာ ဒါမှမဟုတ် အထက်ဖော်ပြပါအချက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကိုပြသင့်ပါပြီ။
Epididymitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ရောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ သင့် ရဲ့အသက်နဲ့အပြုအမူတွေအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေပါတယ်။
• လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ ။ ယောက်ျားလေးများတွင်သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းကို အဖြစ်စေဆုံးအကြောင်း မှာ ဆီးပူညောင်းကျရောဂါ နှင့် chlamydia ရောဂါတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
• ကူးစက်ရောဂါများ။ လိင်မှမဟုတ်သော အခြား နည်းလမ်းများဖြင့် ကူးစက်သော ဘက်တီးရီးယားများ ကလည်းသုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍သင့်ဆီးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆီးကျိတ်မှာ ရောဂါ ပိုး ကူးစက်ခံနေရပြီဆိုရင် ရောဂါပိုးဟာကူးစက်တဲ့နေရာ ကနေ သုက်ပို့ပြွန်ကိုရောက်ရှိသွားပြီး သုက်ပို့ပြွန် ရောင်ရမ်းခြင်း တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
• Amiodarone ဆိုတဲ့နှလုံးရောဂါ ကုသဆေး ဟာလည်း သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။
• အလေးမခြင်း ကဲ့သို့ ခွန်အားအရမ်းညှစ်ထုတ်သော အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါ ဆီးဟာသုက်ပို့ပြွန်ထဲကိုနောက်ပြန်စီးသွားပြီး သုက်ပို့ပြွန်ထဲမှာဆီးတွေရောက်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကို chemical epididymitis လို့ခေါ်ပါတယ်။
• ပေါင်ခြံ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကနေလည်း သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်းလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
• တီဘီရောဂါပိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့အဖြစ်နည်းပါတယ်။
Epididymitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ကို မြင့်မားစေသော အကြောင်းအရာတွေကတော့
• ကွန်ဒုံးမပါပဲ လိင်ဆက်ဆံမိခြင်း သို့မဟုတ် ရောဂါပိုးရှိသူနှင့်လိင်ဆက်ဆံမိခြင်း
• ဆီးလမ်းကြောင်းတွင်ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်ခြံဒဏ်ရာရထားခြင်း
• Amiodarone ဆေး အသုံးပြုနေခြင်း
• သင့်ရဲ့ ဆီးကျိတ် ကြီးနေခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Epididymitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ရဲ့ဒေါက်တာဟာသင့်ရဲ့ဝှေးစေ့နဲ့ပေါင်ခြံဒဏ်ရာကိုစစ်ဆေးခြင်း နဲ့စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်သင့်ရဲ့လိင်တံကနေသုက်ရည်များထွက်ခြင်းရှိမရှိလည်း စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်လည်းသင့်ရဲ့သုက်ရည်နမူနာကို ယူကြပါလိမ့်မယ်။ အခြားထပ်စစ်ဆေးမယ့်ဟာတွေကတော့
• ဆီးနဲ့သွေးစစ်ခြင်း။ ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒီနမူနာတွေကိုယူဖို့လိုပါတယ်။
• ဝှေးစေ့စုတ်ပြဲခြင်း နဲ့ တစ်ခြားရောဂါတွေကို စစ်ဆေးဖို့အတွက် အာထရာဆောင်း ရိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုရိုက်ခြင်းဟာသင့်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုသေသေချာချာမြင်ရပြီးတိကျတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Epididymitis (သုက်ပို့ပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
• သုက်ပို့ပြွန်ဖယ်ပစ်ဖို့လိုနေပြီဆိုရင် (သို့) အခြားသောရောဂါ အခံတစ်ခုခု ကို ဖယ်ရှားဖိုလိုအပ်နေပြီဆိုရင် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုပါတယ်။
Epididymitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/epididymitis/basics/lifestyle-home-remedies/con-20032876. Accessed
http://www.nhs.uk/conditions/epididymitis/Pages/epididymitis.aspx. Accessed July 21, 2016.Epididymitis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/epididymitis/basics/lifestyle-home- remedies/con-20032876. Accessed
http://www.nhs.uk/conditions/epididymitis/Pages/epididymitis.aspx. Accessed July 21, 2016.